Sidee baan u sameyn karaa galmo ammaan ah? - Hablaha Media Network
Sidee baan u sameyn karaa galmo ammaan ah?
HMN:- Xeerka aasaasiga ahi waxaa weeye inaad iska ilaaliso dhiiga, manida (cum) ama qoyaanka ferjiga ee qofka aad isu galmooneysaan inuu galo jirkaaga.
Siyaalo aad u ilaalin kartid naftaada iyo kuwa kaleba:
• U isticmaal kondhomka iyo saliida biyaha leh si sax ah dhammaan dadka aad isu galmooneysaan.
• Isticmaal galmada aan dhabta ahayn’ sida shuminta, isu siigeynta iyo taabashada, salaaxida, jirka isasaarida, masaxida iyo u masaajeynta kacsiga leh.
• U galmood oo keliyga wehelkaaga joogtada ah. Galmada aan difaaca lahayn ee wehelka caadiga ah waxay ammaan noqoneysaa oo keliya haddii labadiinaba laydin baaro oo aad ka madaxbanaantihiin dhammaan infekshinada laysqaadsiiyo STIs iyo in labadiina midkiina uusan u galmoon cid kale.